ကိုဗစ်ကာလ စီးပွာရေး မကောင်း တဲ့ အ ချိန် ကြက်ဥဝယ်ဖို့တောင်အနိုင် နို င်ဖြစ်နေတဲ့သူ့အတွက်စိန်တွေကိုLive မှာ သိန်းရာကျော်တန်တွေကိုပဲ ကြီး လှော် ဝယ်သလို ဝယ်နေသူတွေကို အံ့ သြနေတဲ့သားညီ – XB Media Myanmar
Myanmar Cele ပရိသတ်ကြီးရေ သားညီက တော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာထိပ်တန်းစူပါမင်း သား ကြီးတွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဦးပါ။သရုပ်ဆောင်အပြင် အခုချိန်မှာ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ် တည်နေသူပါ။ သူရိုက်ကူးတဲ့ကြော်ငြာတွေကအစပရိသတ်တွေသဘောကျ အားပေးခဲ့ရတာ ဖြစ် ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးနေသူပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ ” ကိုဗစ်ကာလ စီးပွာရေး မကောင်းဘူးသာပြောနေကြတာLive လွှင့်ရောင်းတဲ့ စိန် ဆိုင်တွေမှာဝယ်နေလိုက်ကြတာများ သိန်းရာကျော်တန်တွေကိုပဲကြီးလှော် ဝယ်သလို ဝယ်နေကြ တာ ဟ !!!ကိုယ်တွေများ ကြက်ဥတောင်တစ်ကဒ်ဝယ်မလား နှစ်ကဒ်တစ်ခါတည်း ဝယ်ရမလား တော် တော် စဉ်းစားနေရတယ် …”ဆိုတဲ့စာလေးတင်လာခဲ့တာပါ။
Myanmar Cele ပရိသတ်တွေထဲမှာရော သားညီနဲ့အဖြစ်တူနေတဲ့သူတွေရှိရင်မှတ်ချက်ပေး ခဲ့ ပါ ဦးနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Myanmar Cele- Cafe ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source : TharNyi
Myanmar Cele ပရိသတ္ႀကီးေရ သားညီက ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာထိပ္တန္းစူပါမ င္း သား ႀကီးေတြရဲ႕မ်ိဳးဆက္တစ္ ဦးပါ။သ႐ုပ္ေဆာင္အျပင္ အခုခ်ိန္မွာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေ ယာ က္အျဖစ္ ရပ္ တည္ေနသူပါ။ သူ႐ိုက္ကူးတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြကအစပရိသတ္ေ တြသေဘာက် အားေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း႐ို က္ ကူးေနသူပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ” ကိုဗစ္ကာလ စီးပြာေရး မေကာင္းဘူးသာေျပာေနၾကတာLive လႊင့္ေရာင္းတဲ့ စိန္ ဆိုင္ေတြမွာဝယ္ေနလိုက္ၾကတာမ်ား သိန္းရာေ က်ာ္တန္ေတြကိုပဲႀကီးေလွာ္ ဝယ္သလို ဝယ္ေနၾက တာ ဟ !!!ကိုယ္ေတြမ်ား ၾ ကက္ဥေတာင္တစ္ကဒ္ဝယ္မလား ႏွစ္ကဒ္တစ္ခါတည္း ဝယ္ရမလား ေတာ္ ေတာ္ စဥ္းစားေန ရတယ္ …”ဆိုတဲ့စာေလးတင္လာခဲ့တာပါ။
Myanmar Cele ပရိသတ္ေတြထဲမွာေရာ သားညီနဲ႔အျဖစ္တူေနတဲ့သူေတြရွိရင္မွတ္ခ် က္ေပး ခဲ့ ပါ ဦးေနာ္။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Myanmar Celeပရိသတ္ႀကီးအား လုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာ င္းေ ပးလို က္ပါတယ္ေနာ္။
ထက်ထက်မိုးဦးဆီကနေ သိန်း(၁၅၀) တန် နားဆွဲလေး ဝယ်ယူအားပေးပြီး ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ သက်သေ ပြ ခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေကို စည်းချက်ညီညီ လှုပ်ခါကာ ညီအစ်မ တွေအတူတူ အမိုက်စားကထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး November 23, 2020
ဖခင်ကြီး မျက်စိခွဲစိတ်ကုသဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်အားခလေးနဲ့ လက်ဆယ် ဖြာမိုးကန်တော့ခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးတို့ ဇနီး မောင်နှံ November 23, 2020
လက်ပေါ်မှာတင် (၂) လသမီးအရွယ် ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ချစ်သမီး Apple လေးကိုချစ်မဝတဲ့အကြောင်းတွေပြော လာတဲ့ ဆန်းသစ်လ November 23, 2020
တူမဖြစ်သူ G ရဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ကို ချီး ကျူး လိုက်တဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် November 23, 2020
သိန်းဆယ်ချီတန်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Iphone အသစ်စက်စက်တစ်လုံးကို လက်ဆောင်ရလိုက်လို့ အရမ်းပျော် ရွှင်နေတဲ့ စွမ်းဇာနည် November 23, 2020
လက်ရှိမှာ အောက်စီဂျင်ပေးထားရပြီး အိမ်ကဘယ်သူမှလိုက်သွားခွင့်မရှိ တာ ကြောင့် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဦးမိုးဒီအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့အ ကြော င်း ပြောပြလာတဲ့ သားဖြစ်သူ ကောင်းစံ November 23, 2020
ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကိုဗစ် 1st Wave မှာ ပျက်စီးသွား တဲ့ပန်းစိုက်ခင်းကြီးကိုပြန်လည်အောင် မြင်အောင် ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ လွင်မိုး November 23, 2020
အများကြီး မျှော်လင့်ပြီး အား ပေးခဲ့ ကြ တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် တာဝန်မ ကျေ ခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ မျှ ဝေ လာတဲ့ ဂျပန်ကြီး November 23, 2020
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မေတ္တာပို့ အမျှဝေနည်းလေးကို မျှ ဝေလာတဲ့ နေခြည်ဦး November 23, 2020